Dhaca Gaadiidka oo kusoo badanaya Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Dhaca Gaadiidka oo kusoo badanaya Galmudug
Dhacdooyinkan waxay noqdeen kuwo caadi ah, maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle wax wara kama soo saarin, mana u muuqdaan in ay xallin rabaan.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Malleeshiyaad hubeysan ayaa Gaari Xamuul ah ka af-duubtay inta u dhaxeysa Guriceel iyo Matabaan, iyagoo ula dhaqaaqey dhanka Miyiga.
Qof ka mid ah Rakaabkii la socdey oo si dirqi ah ku baxsadey, ayaa Ciidamada Amaanka u sheegey Maanta in Gaariga iyo rag saarnaa la isku kaxeystay, kuwaasoo ay u badan tahay in la waydiisan doono madax-furasho.
Dhacan oo ay geysteen Malleeshiyadda, oo isku abaabuley qaab beeleed ayaa u muuqda mid loogu aar-gudayo afduub Todobaadyo kohor agagaarka degmada Maxaas loogu geystay Gaari ay la socdeen tiro dad ah, oo markii dambe lagu soo daayey qiimo lacageed oo dhan afartan kun oo Dollar.
Waa afduubkii 8-aad hal bil gudaheeda ka dhacaya Galmudug, oo maamulka jira ee uu hogaamiyo Qoor-Qoor ku fashilmay amniga iyo dib u heshiisiinta, isagoo waqtigiisa ku dhameeyay safarro Muqdisho iyo meelo kale oo ugu adeegayo Farmaajo.
Dhacdooyinkan waxay noqdeen kuwo caadi ah, maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle wax war ah kama soo saarin, mana u muuqdaan inay xallin rabaan dhibaatadda.